Waxaan u bedeli karaa Lugood Apps in Android?
Hubaal Mid ka mid ah casriga ugu caansan dunida waa iPhone, iyo sida waqtiga uu dukaanka app ayaa loo beddelaa mid meel weyn oo xiiso leh halkaasoo aad ka heli karto tan oo Chine ee qiimaha weyn. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, dukaanka app wuxuu siiyaa tiro balaadhan oo ah qalab aad u isticmaali karto mar walba, laakiin ay ka biyodiiday weyn oo waa in barnaamijyadooda u shaqeeyaan oo kaliya on boosteejo macruufka ah, si si fudud aad aan u isticmaali karaa OS kasta oo kale, sida Android tusaale ahaan.
Inkastoo laga yaabo inaad is weydiiso sida aad si Android awoodi karaa inuu wareejiyo barnaamijyadooda Lugood, xaqiiqadu waxa ay tahay in wax caynkaas ah oo keliya ma la samayn karaa. Sababta ka dambeysa arrintan waa in mid kasta oo ka mid dhufto ee ay u isticmaasho luqadood oo kala duwan iyo barnaamijyo inkastoo barnaamijyadooda la mid ah ka raadinaya badan, ka soo jeeda iyo horumarinta waa mid aad u kala duwan, kuwaas oo iyaga si loogu badalo ka mid madal si kale wax aan macquul aheyn ka dhigaa.
Tani waa sababta ay shirkadaha dhismaha waxay leeyihiin kooxo kala duwan oo u shaqeeya version kasta oo app. Nasiib darro, xaqiiqada ah in aadan ku wareejin karo ama loogu badalo ka barnaamijyadooda Lugood in Android noqon kartaa biyodiiday weyn, laakiinse nasiib wanaag waxaa jira xal u ciyaaro kuwa kulan Lugood aan ka kaaftoomi in badan, wax aad dhab ahaan u eg mar walba doono.
Laba App Store ugu weyn ee Android Users soo bixi Apps waa in aad taqaan
Waa maxay sababta aad u rabto lahaa si loo soo dajiyo barnaamijyadooda ka app dukaanka macruufka marka aad caadi ahaan version ah oo ka mid ah barnaamijyadooda macruufka on boosteejo macruufka ah mar walba. Haa, waxaa jira tan oo dukaamada aad u isticmaali karto ee Android, iyo in kastoo ay laga yaabaa in aan sida wanaagsan iyo sida olaga mid ka mid macruufka noqon, weli waa ay badan aad u functional iyo buuxsamay tiro balaadhan oo ah codsiyada in aad ku rakiban kartaa iyo download waqtiyada oo dhan. Sida aan ku sheegay, waxaa jira dukaamo badan halkan, laakiin kuwa ugu fiican yihiin, oo ay ilaa iyo haatan, Google Play iyo Amazon Dukaamada.
Sida magaca ku leeyahay, waxan la abuuray by Google, taas oo macnaheedu yahay in ay jiraan wax badan oo taageero u ah ee ay. Isla mar ahaantaa, Store Play leeyahay malaayiin codsiga ku haboon kaliya nooc kasta oo xaaladda, sidaa darteed haddii aad u baahan tahay wax caawinaad ah, dukaanka ayaa ku siin kara nooc kasta oo app aad u baahan tahay. Waxa muhiim ah in la ogaado in dukaanka Play Google ayaa interface ku ogaado, doorasho raadinta weyn oo aad si fudud u maarayn karaan badan telefoonada / kiniinno waqti isku mid ah, in ay tahay wax si dhab ah u sahlan.
Download The dadajiyaa marka ay timaado Google Play waa mid aad u wanaagsan, oo aad si fudud u isticmaali kartaa dukaanka si loo helo ka-ada aad u baahan tahay inaad kala duwan ee qaybaha mahad heli karo waxaa ku. Google Play waa weyn oo badan waxa lagu kaydin ugu fiican codsiga ka fiirsan, si aad u aw karaa in la isticmaalayo si fiican u qalantaa haddii aad u baahan tahay barnaamijyadooda aallada Android aad.
The Amazon App Store waxaa la abuuray by Amazon la fikradda ah bixiya barnaamijyadooda Android in macaamiisha ay soo iibsatay kiniiniga ay. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, App Amazon ee Store waa sidaas oo ka sii badan intii ku qabsado lacag caddaan ah oo sahlan, sida ay ku siinaysaa awood u leh inay dhirtuba dad faro badan oo ah qaybaha, halka sidoo kale ay awoodaan in ay helaan app ah maalintii oo lacag la'aan ah, iyada oo aan wax xannibaad ah.
On App Amazon ee Store waxa kale oo aad ka heli karto tan ah ee taas sii dheer, codsiyada badan oo lacag la'aan ah, goodhiyaha, iyo xitaa aad qaadi karto barnaamijyadooda aad rabto in aad ku wadid tijaabo ah, si ay u arkaan haddii ay u qalmaan duuban ama wax iibsiga. The Amazon App Store laga yaabo in aysan sida badan oo sida dukaamada kale, laakiin weli waxaa jira tan oo Chine halkan, iyo is-dhexgalka weyn nidaamka Amazon ee Diinaar wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan ka dibna ku qaataan lacagta birta ah ee codsiyada mar walba aad rabto.
Sida aad arki karto, xataa haddii aan kuu soo gudbin karaan barnaamijyadooda Lugood in Android, waxaa jira xal loogu heli barnaamijyadooda la mid ah kuwa aad ka heli on macruufka aan jabiyay bangiga. The Amazon App Store, iyo sidoo kale Google Play yihiin iyo sidoo kale mudan in iyaga oo isku dayaya soo baxay, sidaas ha ka cabsan oo markiiba aad u hesho haddii aad rabto in aad dukaamada waaweyn oo qaar ka mid ah ay u soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda aad ka.
> Resource > Lugood > Sida loo Tranfer Lugood Apps in Android